के हो स्वस्थ जीवनशैली ? रोगको ९०% उपचार तपाईकै हातमा !!
Tue, May 26, 2020 at 5:29pm
शुक्रबार, २० भाद्र २०७६,	आहाखबर	1.17K
स्वस्थ जीवनशैलीबाट नै ९० प्रतिशत रोगहरू ठीक हुने गर्छन् । खराब जीवनशैली रोगहरूको प्रमुख कारण हो भने स्वस्थ जीवनशैली आरोग्य जीवनको आधारमात्र नभएर रोगहरूको औषधि पनि हो ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोग तथा मानसिक रोग (नकारात्मक सोचका कारण) जस्ता डरलाग्दा रोगहरू अनुचित जीवनशैलीकै उपज हुन् । र, यस्ता रोगबाट मुक्त हुन आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
स्वस्थ जीवनशैलीका लागि एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन । आहारविहारमा ध्यान दिए पुग्छ । यहाँ आहारको अर्थ व्यापक छ । मुख र जिब्रोले लिने खाद्य पदार्थलाई मात्र आहार मान्नु हुँदैन । आहारको अर्थ हुन्छ, बाहिरको चिज शरीर भित्र लिनु । जेसुकै कुरा पनि हामीले बाहिरबाट भित्र लिन्छौं भने त्यो आहार हो ।
भोजन आहार हो, जसलाई हामीले मुख र जिब्रोद्वारा भित्र लिन्छौं । तर आँखाद्वारा पनि हामीले बाहिरको दृश्य भित्र लिन्छौं । दृश्य पनि आहार नै हो । कानले लिने आवाज, त्वचाले गर्नेे स्पर्श तथा मनले ग्रहण गर्ने विचार र कल्पना पनि आहार नै हो । गलत विचारको आहारले नै अधिकांश मानसिक रोग सुरु हुन्छन् ।
- बिहान सूर्योदयपूर्व वा ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने बानी बसाल्ने ।
- उठ्नासाथ एकदुई गिलास शुद्ध पानी (कब्जियतले दिसा खलास हुँदैन भने मनतातो पानी) पिएर बाथरुम जाने ।
- दिसापिसाब तथा स्नान गर्ने ।
-सफासुग्घर लुगा लगाएर शान्त, सफा र खुल्ला ठाउँमा बसेर प्राणायाम, ध्यान तथा योग आसनहरू गर्ने ।
- सकिन्छ भने दिनहुँ पाँच किलोमिटर हिँड्ने या दौडिने ।
- कम्तीमा पनि महिनाको एक पटक उपवास बस्ने ।
- काम पूरा लगनका साथ गर्ने ।
- परिश्रमअनुसार विश्राम गर्ने ।
- बढी भोगविलास नगर्ने ।
- विवाहित भए सप्ताहमा एकदुई पटक सहवास गर्ने ।
- समयमै खाने, समयमै सुत्ने र समयमै उठ्ने ।
- गहिरो र पर्याप्त निद्रा लिने ।
- सधैं सत्य, प्रिय र हितकारी वचन बोल्ने ।
- फटाहा कुरा नगर्ने, कटुवचन नबोल्ने ।
- विनम्र व्यवहारको अपेक्षा गरिएजस्तै आफूले पनि विनम्र व्यवहार गर्ने ।
- फजुल खर्च नगर्ने, जुवातास नखेल्ने, व्यभिचार तथा अनावश्यक फेसनमा धन र समय खेर नफाल्ने ।
- जीवनको एक महान् लक्ष्य बनाउने र त्यसका लागि प्रयासरथ रहने ।
- मेहनतको पसिना बगाउने र अनि चैनका साथ सुत्ने ।
- बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने ।